【my】テラジア　隔離の時代を旅する演劇 ABOUT | terasia
TERA နှင့် ASIA ပေါင်းစပ်ထားသောစကားလုံးဖြစ်ပြီး အာရှတိုက်တခွင်အားနယ်မြေစည်းမျဉ်းများမကျော်ဘဲခရီးသွားခြင်းဖြစ်သည်။
TERASIA : တသီးတသန့်ခွဲခွာနေရချိန်တွင် ကူးလူးဆက်ဆံခရီးသွားခြင်းအတွက်ဇာတ်ရုံဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းပရောဂျက်ကို ကိုဗစ်ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါပေါက်ဖွားလာသည့် ၂၀၂ဝခုနှစ်တွင်စတင်စီစဉ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် တိုကျိုမြို့တွင်ပထမဆုံးဖျော်ဖြေခဲ့သော TERA ပြဇာတ်အား အာရှတိုက်တခွင်မှအနုပညာရှင်များက မိမိသဏ္ဍာန်ဖြင့် ပြန်လည်ခံစားပုံဖော်တင်ဆက်ကြမည်ဖြစ်သည်။
TERA ပြဇာတ်အားပြန်လည်တင်ဆက်ကြမည့် ဂျပန်၊ ထိုင်း၊ မြန်မာ၊ ဗီယက်နမ်၊ အင်ဒိုနီးရှားအနုပညာရှင်များ၏ဇာတ်ကြောင်းများတွင်တူညီချက်တစ်ခုရှိသည်။ သေခြင်းတရားနှင့်ဆက်စပ်သည့်မေးခွန်းများကို စူးစမ်းလေ့လာကြမည်ဖြစ်ပြီး အမြင်နှင့်မဖမ်းယူနိုင်သော သတ္တဝါများဖြစ်သည့် ဘုရားများ၊ ဗုဒ္ဓများ နှင့် ၀ိညာဉ်များကို ကဗျာ၊ ပုံပြင်၊ သီချင်း၊ ဗုဒ္ဓအယူအဆများနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာနေရာများအား အသုံးပြု၍လေ့လာသွားမည်ဖြစ်သည်။
– ဘာတွေကိုယုံကြည်ပြီး ဘယ်လိုဦးတည်နေတာလဲ?
– ရှင်သန်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ? သေခြင်းဆိုတာဘာလဲ?
ဒီလိုယေဘုယျကျတဲ့ဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာမေးခွန်းတွေကိုရင်ဆိုင်ရင်း ကိုယ်ပိုင် TERA ဇာတ်ကြောင်းတခုအား မိမိတို့နဲ့နီးစပ်ရာပတ်ဝန်းကျင်ကတန်ဖိုးတွေ၊ လူ့သမိုင်းတွေကိုထင်ဟပ်အောင် ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်တွေ၊ လွှမ်းမိုးမှုတွေနဲ့ပြန်လည်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် TERASIA ၏နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများကို ဘာသာစကားများစွာဖြင့်တွေ့မြင်နိုင်ပါမည်။
ပရောဂျက်တွင်ပါဝင်သူများသည် အဝေးတစ်နေရာစီမှဖန်တီးမှုများဖလှယ်ရင်း ဘာတွေကိုကြုံတွေ့ပြီး ဘာတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မလဲ?
အချိန်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါ ဒီအွန်လိုင်းနေရာမှာဖန်တီးမှုများကို “မြင်တွေ့” နိုင်မှာပါ။
တချိန်တည်းမှာပဲ လူတဦးနဲ့တဦးထိတွေ့မှုပုံစံတွေပြောင်းလဲနေချိန်မှာ “မမြင်တွေ့” နိုင်တဲ့အရာတွေကို TERASIA ကဆက်လက်စူးစမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တနည်းနဲ့ပြောရရင်တော့ ဒီပရောဂျက်ခရီးစဉ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ တချိန်ချိန်မှာလူအချင်းချင်းပြန်ဆုံနိုင်မယ့်အချိန်ကိုဦးတည်မျှော်လင့်ရင်း လူသားဖြစ်တည်မှုရဲ့အခရာကျတဲ့နေရာကို ယဉ်ကျေးမှုစည်းမျဉ်းမျိုးစုံကနေချဉ်းကပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာတော့ TERASIA ပူးပေါင်းဆောက်ရွက်မှုပရောဂျက်မှာ မတူညီတဲ့နောက်ခံကလာတဲ့ပညာရှင်မျိုးစုံပါဝင်လာပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံနှင့် ဂျပန်မှပညာရှင်များပါဝင်ပါတယ်။ ဒီပရောဂျက်ဟာ လူအသစ်တွေနဲ့ထိတွေ့ရတိုင်း အစဉ်အဆက်ပြောင်းလဲလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် မတူညီတဲ့ရှုထောင့်၊ မတူညီတဲ့နောက်ခံကနေလာတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုင်းကိုကြိုဆိုလျက်ရှိပါတယ်။
Festival/Tokyo ၁၈တွင်ပါဝင်သော မြို့ပြပါဖောမင့်စီးရီး
“ Tera” အားစတင်မိတ်ဆက်ခြင်း။ ဂျိုတိုကျောင်း၊ စိုင်းဟို ဘုရားကျောင်း၊ တိုကျိုမြို့၊ ဂျပန်နိုင်ငံ။
“ Tera” အား တူးနီးရှားနိုင်ငံတွင် Carthage International Theater Days Festival အတွက်လှည့်လည်ပြသခြင်း (Tunis၊ Monastir နှင့် Zaghouan မြို့များတွင်ပြသခဲ့သည်)
TERASIA : တသီးတသန့်ခွဲခွာနေရချိန်တွင် ကူးလူးဆက်ဆံခရီးသွားခြင်းအတွက်ဇာတ်ရုံအား ဂျပန်၊ ထိုင်း၊ မြန်မာ နှင့် အင်ဒိုနီးရှားမှအနုပညာရှင်များကအွန်လိုင်းတွင်စတင်ဖော်ဆောင်ခြင်း။
Meiji တက္ကသိုလ်၏ ပါဖောမင့်အနုပညာဘာသာရပ် နှစ်ခုတွင် ပရောဂျက်အကြောင်းရှင်းပြခြင်း။ (ပို့ချသူ – Rina Tanaka)
“ TERA เถระ” စတင်မိတ်ဆက်ခြင်း။ Wat Phalat ဘုရားကျောင်း၊ ချင်းမိုင်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ။ “ TERA เถระ” စတင်မိတ်ဆက်ခြင်း။ Wat Phalat ဘုရားကျောင်း၊ ချင်းမိုင်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ။
“ TERA เถระ” အွန်လိုင်းပြသမှုနှင့် အနုပညာရှင်စကားဝိုင်း။
“ TERA เถระ” ပြသခြင်းနှင့် ကျိုတိုအနုပညာစင်တာတွင် ပရောဂျက်တင်ဆက်ခြင်း။
TPAM (Performing Arts Meeting in Yokohama) တွင်ပရောဂျက်တင်ဆက်ခြင်း။
“ TERA in Kyoto” စတင်ပြသခြင်း။ Rinzai ကျောင်း၊ Kosho-ji ဘုရားကျောင်း၊ ကျိုတို၊ ဂျပန်နိုင်ငံ။
Meiji တက္ကသိုလ်၏ ပါဖောမင့်အနုပညာဘာသာရပ် စ်ခုတွင် ပရောဂျက်အကြောင်းရှင်းပြခြင်း။ (ပို့ချသူ – Rina Tanaka)
TERASIA အွန်လိုင်းသီတင်းပတ် ၂၀၂၁ အွန်လိုင်းပွဲတော်ငယ်
မြန်မာအနုပညာရှင်များ၏တင်ဆက်မှု “သေခြင်းတရားအား မျက်နှာဖုံးစွပ်ခြင်း/ခွာချခြင်း” (စီစဉ်ပြီး)
ဗီယက်နမ်အနုပညာရှင်များ၏ “ TERA Vietnam (နာမည်အတိတကျမဟုတ်သေး)” ဗီဒီယိုအားမိတ်ဆက်ပြသခြင်း (စီစဉ်ပြီး)
အင်ဒိုနီးရှားအနုပညာရှင်များ၏ “TERA Indonesia (နာမည်အတိတကျမဟုတ်သေး)” ဗီဒီယိုအားမိတ်ဆက်ပြသခြင်း (စီစဉ်ပြီး)
ပါဝင်သောအနုပညာရှင်အားလုံးတက်ရောက်မည့် TERASIA ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအား ဂျာကာတာမြို့တွင်ကျင်းပခြင်း (စီစဉ်ပြီး)